1 Korintofo 15:1-58
15 Afei anuanom merema moahu asɛmpa+ a meka kyerɛɛ mo,+ na mo nso mugyei, na mugyina mu+ no. 2 Bio nso wɔnam asɛm a mede kaa asɛmpa no kyerɛɛ mo no so regye mo nkwa,+ sɛ muso mu denneennen a, gye sɛ ebia mobɛyɛɛ gyidifo kwa.+ 3 Na nsɛm a edi kan a me nso minyae+ a mede maa mo ne sɛ yɛn bɔne nti na Kristo wui sɛnea Kyerɛwnsɛm no ka no;+ 4 na wosiee no,+ na da a ɛto so abiɛsa+ no, wonyan no,+ sɛnea Kyerɛwnsɛm no ka no;+ 5 na oyii ne ho adi kyerɛɛ Kefa+ ne afei dumien no.+ 6 Ɛno akyi no, oyii ne ho adi kyerɛɛ anuanom bɛboro ahanum bere koro mu, na wɔn mu dodow no ara da so te ase,+ nanso wɔn mu binom adeda wɔ owu mu. 7 Ɛno akyi no oyii ne ho adi kyerɛɛ Yakobo,+ ne afei asomafo no nyinaa;+ 8 na nea etwa to koraa no, oyii ne ho adi kyerɛɛ me+ a mete sɛ nea ne bere anso a wɔwoo no yi. 9 Na mene nea osua koraa+ wɔ asomafo no mu a mensɛ sɛ wɔfrɛ me ɔsomafo, efisɛ metaa+ Onyankopɔn asafo. 10 Nanso Onyankopɔn adom+ nti na mete sɛnea mete yi. Na dom a ɔdom me no anyɛ kwa,+ na mmom mebɔɔ me ho mmɔden sen wɔn nyinaa,+ nanso ɛnyɛ me, na ɛyɛ Onyankopɔn adom a ɛka me ho no.+ 11 Nanso sɛ́ ɛyɛ me anaa ɛyɛ wɔn no, saa na yɛka asɛm no, na saa na moagye adi.+ 12 Afei sɛ wɔreka Kristo ho asɛm sɛ wɔanyan no afi awufo mu+ a, adɛn nti na mo mu binom ka sɛ awufo sɔre biara nni hɔ?+ 13 Na sɛ awufo sɔre nni hɔ de a, na ɛkyerɛ sɛ wɔannyan Kristo nso.+ 14 Na sɛ wɔannyan Kristo nso a, yɛn asɛnka yɛ kwa, na yɛn gyidi nso yɛ kwa.+ 15 Afei nso wobebu yɛn sɛ yɛadi Onyankopɔn ho adansekurum,+ efisɛ yɛadi adanse+ atia Onyankopɔn sɛ wanyan Kristo,+ a sɛ awufo sɔre biara nni hɔ a, anka wannyan no.+ 16 Na sɛ wɔrennyan awufo a, na ɛkyerɛ sɛ wɔannyan Kristo nso. 17 Bio nso, sɛ wɔannyan Kristo a, na mo gyidi so nni mfaso, na moda so wɔ mo bɔne mu.+ 18 Nokwarem no, ɛbɛkyerɛ nso sɛ wɔn a Kristo mu wɔdedae wɔ owu mu+ no asɛe kwa.+ 19 Sɛ nkwa yi mu nko na yɛanya Kristo mu anidaso+ a, ɛnde na yɛn na yɛyɛ mmɔbɔ paa wɔ nnipa nyinaa mu. 20 Nanso afei wɔanyan Kristo afi awufo mu+ sɛ wɔn a wɔadeda wɔ owu mu no aba a edi kan.+ 21 Na sɛnea ɛnam onipa so na owu+ bae no, saa ara na ɛnam onipa so na owusɔre nso bae.+ 22 Na sɛnea obiara rewu wɔ Adam mu+ no, saa ara na wɔbɛma obiara anya nkwa wɔ Kristo mu.+ 23 Nanso obiara ne ne gyinabea: Kristo ne aba a edi kan+ no, ansa na wɔn a wɔyɛ Kristo dea no adi hɔ wɔ ne mmae mu.+ 24 Ɛno akyi na awiei no bɛba ma ɔde ahenni no ahyɛ ne Nyankopɔn ne n’Agya nsa, bere a watu aban ne tumi ne ahoɔden nyinaa agu+ no. 25 Na etwa sɛ odi hene kosi sɛ Onyankopɔn de atamfo nyinaa begu ne nan ase.+ 26 Ɔtamfo a otwa to a obetu no agu ne owu.+ 27 Na Onyankopɔn “de nneɛma nyinaa guu ne nan ase.”+ Na sɛ ɔka sɛ ‘wɔde nneɛma nyinaa agu ne nan ase’+ a, emu da hɔ pefee sɛ nea ɔde nneɛma nyinaa guu ne nan ase no nka ho bi.+ 28 Na sɛ onya de nneɛma nyinaa gu ne nan ase+ a, afei Ɔba no ankasa nso de ne ho bɛhyɛ Nea+ ɔde nneɛma nyinaa hyɛɛ n’ase no ase, na Onyankopɔn ayɛ ade nyinaa ama obiara.+ 29 Anyɛ saa a anka wɔn a wɔbɔ wɔn asu kɔ owu mu no bɛyɛ dɛn?+ Sɛ awufo nsɔre koraa+ a, dɛn nti na wɔbɔ wɔn asu+ kɔ owu mu? 30 Adɛn nti nso na yɛwɔ asiane mu dɔn biara?+ 31 Da biara me ne owu bɔ mpunimpu.+ Anuanom, mede ahurusi+ a midi wɔ mo ho wɔ yɛn Awurade Yesu Kristo mu si so dua. 32 Sɛ me ne mmoa koe sɛnea nnipa yɛ wɔ Efeso+ no a, mfaso bɛn na ɛwɔ so ma me? Sɛ awufo nsɔre a, ɛnde “momma yennidi na yɛnnom, na ɔkyena na yɛawu.”+ 33 Mommma wɔnnnaadaa mo. Fekubɔne sɛe ɔbra pa.+ 34 Momma mo ani nna hɔ+ wɔ trenee mu, na monntena bɔne mu, efisɛ ebinom nni Onyankopɔn ho nimdeɛ.+ Merekasa de ahyɛ mo aniwu.+ 35 Nanso obi bɛka sɛ: “Ɔkwan bɛn na wɔbɛfa so anyan awufo? Nipadua bɛn mpo na wɔde reba?”+ 36 Onipa a wunni adwene! Nea wudua no nnya nkwa, gye sɛ awu ansa;+ 37 na nea wudua no, ɛnyɛ dua a ɛbɛba no na wudua, na mmom aba kɛkɛ,+ awi anaa foforo biara; 38 nanso Onyankopɔn ma ɛyɛ dua+ a ɔpɛ,+ na aba no mu biara nya n’ankasa dua. 39 Ɔhonam nyinaa nyɛ honam koro, na mmom ɛsono adesamma de na ɛsono ntɔteboa de, ɛsono nnomaa de na ɛsono mpataa+ de. 40 Na ɔsoro+ abɔde wɔ hɔ na asase so abɔde+ wɔ hɔ; na ɔsoro abɔde anuonyam+ nko na asase so abɔde de nko. 41 Owia+ anuonyam nko na ɔsram+ anuonyam nko, na nsoromma+ nso anuonyam nko; na nsoromma mpo, emu biara ne n’anuonyam. 42 Saa ara nso na awufo sɔre te.+ Wodua no nea ɛporɔw mu, wonyan no nea ɛmporɔw+ mu. 43 Wodua no animguase mu,+ wonyan no anuonyam mu.+ Wodua no mmerɛwyɛ mu,+ wonyan no tumi mu.+ 44 Wodua no honam nipadua+ mu, wonyan no honhom nipadua+ mu. Sɛ honam nipadua wɔ hɔ a, honhom nipadua nso wɔ hɔ. 45 Saa ara na wɔakyerɛw mpo sɛ: “Onipa a odi kan Adam bɛyɛɛ ɔkra teasefo.”+ Adam a odi akyiri no bɛyɛɛ honhom+ a ɔma nkwa.+ 46 Nanso, ɛnyɛ honhom mu de no na edi kan, na mmom honam mu de no, ɛno akyi ansa na honhom mu de no reba.+ 47 Onipa a odi kan no fi fam na wɔde dɔte na ɛyɛɛ no;+ onipa a ɔto so abien no fi soro.+ 48 Sɛnea nea wɔde dɔte yɛɛ no no+ te no, saa ara na wɔn a wɔde dɔte yɛɛ wɔn no nso te; na sɛnea nea ofi soro+ no te no, saa ara na wɔn a wofi soro no nso te.+ 49 Na sɛnea yɛhyɛɛ nea wɔde dɔte yɛɛ no no suban+ no, saa ara na yɛbɛhyɛ nea ofi soro no nso suban.+ 50 Nanso anuanom, eyi na meka, sɛ honam ne mogya ntumi nnya Onyankopɔn ahenni,+ na saa ara na nea ɛporɔw ntumi nnya nea ɛmporɔw.+ 51 Hwɛ! Meka mo ahintasɛm kronkron bi sɛ: Ɛnyɛ yɛn nyinaa na yɛbɛdeda owu mu, na mmom yɛn nyinaa bɛsesã+ 52 ntɛm so, anibu mu, torobɛnto a edi akyiri no mu. Na torobɛnto+ no bɛhyɛn, na wɔanyan awufo sɛ wɔn a wɔmporɔw, na yɛbɛsesã. 53 Na ɛsɛ sɛ nea ɛporɔw yi hyɛ nea ɛmporɔw,+ na nea ewu+ yi hyɛ nea enwu. 54 Na sɛ nea ɛporɔw yi hyɛ nea ɛmporɔw, na nea ewu yi hyɛ nea enwu a, ɛno na asɛm a wɔakyerɛw no bɛba mu sɛ: “Wɔamene owu+ akosi daa.”+ 55 “Owu, wo nkonimdi wɔ he? Owu, wo nwowɔe wɔ he?”+ 56 Nwowɔe+ a ɛde owu ba ne bɔne, na bɔne tumi ne Mmara+ no. 57 Nanso aseda nka Onyankopɔn, efisɛ ɔnam yɛn Awurade Yesu Kristo so ma yedi nkonim!+ 58 Enti me nuanom adɔfo, muntintim,+ munnhinhim, monyɛ pii wɔ Awurade adwuma no mu+ daa, na munim sɛ mo brɛ renyɛ kwa+ Awurade mu.